Moments leh saaxiibo 26
Miyuu ruuxu ku dhaqmaa nin iyo waxa ruuxu yahay?
Waa in aan su'aalaynaa su'aasha ka hor inta aan ka jawaabi karno. Dad yar ayaa joojiya inay ka fekeraan waxa ay micnahoodu yihiin marka ay isticmaalaan shuruudaha sida ruuxa iyo ruuxaba. Haddii qeexitaannada laga codsado dadkaas waxaa jira dad yar oo aan dareemin inay jaahil ka yihiin ereyada macnaheedu yahay. Waxaa jira jahawareer aad u badan kaniisadda maadaama ay jirto meel ka baxsan. Dadku waxay ka hadlaan ruuxyo wanaagsan iyo jinniyo shar leh, iyo ruuxyo caqli leh, iyo kuwo ruuxaan leh. Waxa la sheegay in uu yahay ruuxa Ilaah, ruuxa nin, ruuxa Ibliiska. Markaas waxaa jira jinniyo badan oo dabiiciga ah, sida ruuxa dabaysha, biyaha, dhulka, dabka, iyo ruuxa loo yaqaan alkolada. Xayawaan kasta waxaa loo abuuray ruux ruuxeed iyo qaar ka mid ah Qorniinka qaarkood waxay ka hadlaan ruuxyo kale oo la qaadayo xayawaanka. Caqiido loo yaqaanno Ruuxa, ama Ruuxa, wuxuu ka hadlayaa ruuxa maskaxda, ilaalinta ruuxa iyo dhul dabiici ah. Qalab-saaruhu wuxuu diidaa in uu jiro ruux. Cilmiga loo yaqaan "Science Science", oo samaynta xoriyadda isticmaalka ereyga, wuxuu ku darayaa jahawareerka wuxuuna adeegsadaa isbedel macquul ah. Ma jiraan wax heshiis ah sida uu ruuxu yahay ama waxa gobolka ama tayada ereyga ruuxiga ahi khuseeyo. Marka ereyga ruuxiga ah la isticmaalo, guud ahaan ku hadla, waxaa loogu talagalay inuu daboolo tayada, sifooyinka iyo shuruudaha loo malaynayo in aanuu jir ahaan ahayn, ma aha wax, maaha dhulka. Sidaa daraadeed waxaan maqalnaa mugdiga ruuxiga ah, iftiinka ruuxiga ah, farxad ruuxi ah, iyo murugo ruuxi ah. Mid ayaa loo sheegay in dadku arkeen sawirada ruuxiga ah; mid ka mid ah maqlo ah ruuxa ruuxiga ah, muujinta ruuxiga ah, dareenka ruuxiga ah iyo xitaa dareenka ruuxiga ah. Ma jiraan wax xaddidan oo ku habboon adeegsiga erayada ruuxa iyo ruuxa. Jahawareerka noocan ahi wuu sii socon doonaa illaa inta dadka ay diidaan inay ka fekeraan waxa ay macnahoodu tahay ama waxa ay ku muujinayaan luqadooda. Waa inaan u isticmaalnaa shuruudo cad oo aan ku muujino fekero qeexan, si markaa fikradaha la fahmi karo loo ogaado. Kaliya erey cad oo qeexan ayaa laga yaabaa inaan rajeyno inaan isula bedelo ra'yiga isla markaana ogaanno habka dhexdhexaadinta maskaxda. Ruuxu waa aasaaska iyo sidoo kale gobolka ugu dambeeya, tayada, ama xaaladda, wax kasta oo muuqda. Xaaladdan koowaad iyo tan ugu dambaysa way ka fog tahay falanqaynta jireed. Laguma soo bandhigi karo falanqaynta kiimikada, laakiin waxaa laga yaabaa in lagu cadeeyo maskaxda. Laguma ogaan karo physicist, ama farmashiyaha, sababtoo ah qalabkooda iyo baaritaannadu ma jawaabi doonaan, sababtoo ah kuwani kuma jiraan diyaarad isku mid ah. Laakiin waxaa laga yaabaa in la caddeeyo maskaxda sababtoo ah maanka ayaa ka mid ah duulimaadka oo laga yaabo inay u tagto gobolkaas. Maskaxdu waa mid ka mid ah ruuxa oo laga yaabo inuu ogaado. Ruuxu waa kan bilaaba inuu guuro oo ka fogaado walaxda waalidka. Walaxda waalidku waa mid aan shaqayn, aan dhaqdhaqaaq lahayn, oo aan baaxad lahayn, isku-buuqsan iyo isku-dhejisan, marka laga reebo qeyb ka mid ah naftiisa oo is-dhaafaayo iyada oo loo marayo mudada loo yaqaan 'involution and evolution, iyo badbaadin marka qaybtaas dib uga soo noqotey waalidka walax Inta u dhaxaysa bixitaanka iyo soo celinta walaxda waalidku maaha sida kor ku xusan. Wakhtiyada kale oo dhan waa mid aan firfircoonayn isla markaana isku mid ah.
Walaxda marka la soo saaro ma aha wax walax, laakiin waa arrin, waana mid weyn oo dabiici ah, badda badda ama caalamka ee dhaqdhaqaaqa rythmic, oo dhan oo ka kooban qayb ka mid ah. Qayb kasta oo ah, sida guud ahaanba, waa laba dabeecadeeda oo aan la qaybin karin. Waa arrin ruuxi ah. Inkasta oo walxo kastaa ay dhici karto oo ay tahay in ay mar dambe u gudubto dhamaan dawladaha iyo xaaladaha, hase yeeshee si kastaba ha noqotee ama si kastaba ha noqotee in la gooyo, loo kala tago ama loo qeybiyo. Xaaladdan ugu horreysa waxaa loogu yeedhaa ruux ahaan iyo inkasta oo dabeecadda labadaba, laakiin aan la isku waafaqsanayn, arrin la xidhiidha ruuxa ayaa loo yaqaan 'spirit' inta lagu jiro xaaladdan koowaad ama midka ruuxiga ah, sababtoo ah ruuxu si buuxda ayuu u sarreeyaa.
Ka dib qorshaha guud ee ku wajahan khilaafka ama muujinta arrintan maskaxiyan, maskaxda ama maskaxda, arrintu waxay u gudubtaa gobolka labaad iyo tan hoose. Xaaladdan labaad way kala duwan tahay tan koowaad. Labada dhinac ee arrinta ayaa hadda si cad u muujinaya. Qayb kasta oo mar dambe uma muuqato in ay u socoto iyada oo aan loo adkeyn. Qayb kasta waa iskaashi, laakiin waxay la kulantaa iska caabin nafteeda. Qayb kasta oo ka mid ah labadeeda waxay ka kooban tahay mid dhaqdhaqaaqa iyo wixii la guuray, iyo inkasta oo laba dabeecadood oo labadaba ah, labada dhinac ayaa midaysan. Mid kastaa wuxuu u adeegaa ujeedada kale. Qalabka ayaa hadda si habboon loo yiraahdaa waxaa loogu yeeraa ruux-arin, iyo gobolka taas oo arrin ruuxeed la yiraahdo waxaa laga yaabaa in loo yaqaan xaalad nololeed ee nolosha. Qayb kasta oo ka mid ah dawladaan xitaa lagu magacaabo arrin la xidhiidha ruuxa arrintu waa mid aad u xakamaynaya oo koontaroolaya taas, taas oo ah ruux, iyo ruux kasta ee walxaha dabiiciga ah wuxuu ku sifoobayaa qeybta kale ama dabeecadda lafteeda. Xaaladda nololeed ee nolosha qofka, ruuxu weli wali waa arrin ujeeddadiisu tahay. Maaddaama qaybo ka mid ah arrimuhu ay sii wadaan caddaynta ama soo noqnoqoshadooda waxay noqdaan kuwo culus iyo cufnaanta oo ay ku sii socdaan dhaqdhaqaaqooda illaa ay ka gudbaan gobolka. Foomka ayaa sheegaya in qaybo ka madaxbannaan, isdifaac, iyo si joogto ah firfircooni ay hadda u socdaan dhaqdhaqaaqooda. Dhibaatadani waa sababta oo ah mawduuca dabiicigu uu ku sifeynayo dabeecadda ruuxiga ee qaybta iyo sababta oo ah walxaduhu waxay isku xidhxidhaan qayb ahaan iyo dhammaanba, arrinka dabeecadda ee qaybta ayaa ku sifaynaya dabeecadooda dabiiciga ah. Maaddaama ay isku mid noqdaan oo isku daraan qaybo, noqdaan qashin iyo cufnaan, waxay ugu dambeyntii u yimaadaan xuduudda dhulka jimicsiga iyo arrintuna waxay markaa ku jirtaa gaadhista sayniska. Maadaama uu kiimistu soo ogaado jilayaasha kala duwan ama hababka arrinka ay ku siinayaan magaca elementka; oo sidaas daraaddeed waxaan helaynaa walxaha, kuwaas oo dhammaantood waa arrin. Qayb kasta oo la wadaagaya dadka kale waxay ka dhigan tahay sharciyo gaar ah, gogol, qeylo dhaan ah, waxaana loo qoondeeyey ama lagu xayeysiiyaa sida arin adag oo nagu wareegsan.
Waxaa jira jismi, muuqaal astaamo, nolosha, iyo ruuxa ruuxiga ah. Dhismaha muuqaalka jirka waa unugyo; Xubnuhu waxay ka kooban yihiin matooro; noloshu waa atomi; ruuxi ahaanshaha waa ruux. Chemist ayaa baari kara jirka iyo tijaabinta arimaha molecular, laakiin weli ma soo galin maskaxda xaalada maskaxda marka laga reebo sharraxa. Dadku ma arki karaan ama dareemi karaan nolol ahaan ama ruux ahaaneed. Nin wuxuu arkaa ama dareensan yahay in uu yahay mid la isku haysto. Waxyaabaha jireed waxaa la xiriiraa dareennada. Qodobbada waxaa lagu dareemayaa dareemada iyaga oo loo marayo. Si aad u aragto ruux maskaxeed ama arrin la xiriira maskaxda, maskaxdu waa inay awood u yeelato inay si xor ah u dhaqdhaqaaqdo marka laga reebo dareenkiisa. Marka maskaxdu si xor ah u dhaqaaqdo iyada oo aan la isticmaalin dareenkiisa waxa ay u muuqan doontaa arrin ruuxeed iyo nolosha. Marka maskaxdu ay awood u yeelato inay garto waxay markaas awood u yeelan doontaa inay ogaadaan ruuxa ruuxiga ah. Laakiin caqiidooyinka ruuxiga ah ama noloshu sidan oo kale loo yaqaano maahan mana noqon karaan kuwa abuuray dareennada aan jidhka lahayn, kuwaas oo aan si taxadar la'aan ah loola macaamiloonin jidhka ama ruuxa ruuxiga ah, iyo muddada dheer iyo damaca jidhka. Ruuxu wuxuu ku dhaqmaa nin sida qiyaasta ah sida nin isku dayey inuu maskaxdiisa ku muujiyo ruuxa. Tani waxa uu ku sameeyaa fikirkiisa. Ninku wuxuu ku jiraa qaybtiisa ugu sareeya ee ruux ahaaneed. Qaybta maskaxeed ee uu ku jiro waa feker ahaan. Dabadeed dabeecadiisa waxa uu yahay xayawaan. Waxaan ognahay inuu yahay jidh ahaan jidh ahaaneed, oo aynu marwalba aragno xayawaanka, had iyo jeer waxay la xidhiidhaan fekerka, iyo marar dhif ah waxaan ku qabannaa farqiga isaga oo ah ruux ahaan.
Maaddaama ruuxa ruuxi ahi uu yahay kobcinta horumarka, asalka koowaad iyo tan ugu dambeysa iyo natiijada horumar. Ruxda bilawga wareegga ama muujinta waa mid aan la qeybin karin.
Maaddaama ay tahay arrin la taaban karo oo ka mid ah arimaha dabeecadda, marxaladda marxaladda, dawlad-goboleedka, iyo ugu dambeyntii taas oo ah arrin ruuxi ah ayaa lagu xiray xabsi iyo xabsi ku xiran dhinaca kale ee dabiiciga ah ee muhiim u ah, sidaa daraaddeed ruuxu si tartiib tartiib ah Talaabadani, waxay u tixgelineysaa sida ay ugu kalsoon tahay arrinkeeda, iyo, ka-hortagida iska-caabbinta arrintiisa, ugu dambeyntii waa in ay xoojisaa arrintan oo ay ka soo baxdo guud ahaan jirka, iyada oo loo marayo adduunka oo doonaya, marxalado fog oo ugu dambeyntii la gaaro dunida fikirka; Marxaladani waxay ka dhalataa dhiiri galin udub dhexaadkeeda ah iyo guulaysiga adduunka ee ruuxa, adduunka aqoonta, halkaas oo ay dib u noqotey oo nafteeda u aqoonsan tahay ka dib markii uu deggenaa muddo dheer oo ku saabsan arrimaha qarsoodiga ah iyo dareennada.